सन्दीपले आईपिएलमा पहिलो विकेट लिएपछि सन्दिपका बुबा मम्मीले के भन्नु भयो ? – Todays Nepal
सन्दीपले आईपिएलमा पहिलो विकेट लिएपछि सन्दिपका बुबा मम्मीले के भन्नु भयो ?
त्यसको बदला लिँदै सन्दीपले चौथो बलमा उनलाई एलबिडब्ल्यू आउट पारिदिए। त्यो उनको आइपिएलमा पहिलो विकेट थियो।
त्यसपछि आएका दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान एबि डी भिलियर्सलाई पहिलो बलमै गुग्ली फालेर सन्दीपले बिट गरे।
छोराले पहिलो खेलमा राम्रो बलिङ गरेको देखेर आमा कोपिलादेवी पनि गदगद भइन्। सन्दीपले क्रिकेट खेल्न थालेपछि नै उनले राम्ररी क्रिकेट बुझ्न थालेकी हुन्।
‘इन्डियामा हुँदा अलिअलिमात्र बुझ्थेँ, सन्दीप नेपाल आएर खेल्न थालेपछि झन् बुझ्न थालेँ,’ कोपिलादेवीले भनिन्,‘पहिला पनि खेलेको टिभीमा देखाउँथ्यो, आइपिएलमा उसको पहिलो खेल भएकाले होला हिजो विकेट लिँदा धेरै नै खुसी लाग्यो।’
चन्द्रनारायणले पाँच वर्षअघि छोराले जे लक्ष्य बोकेर नेपाल आएका थियो त्यो पूरा भएको बताए।
‘आमाबुवा तपाईँहरूलाई नेपालसँग जोडेर चिनाउँछु भनेर आएको थियो, म रिटायर्ड भएर फर्केको पाँच/छ महिनामात्र भयो,’ चन्द्रनारायणले भने, ‘अब ऊ हाम्रोमात्र छोरा रहेन। सबै नेपालीको छोरा भइसक्यो। सम्झँदा धेरै खुसी लाग्छ।’
सन्दीपका बुवाआमा खेल नसकिउञ्जेल टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहे।
हिजोको खेलमा रोयल च्यालेञ्जर्स बैंग्लोरले ५ विकेटले जित्यो। टिमले हारे पनि सन्दीपले राम्रो प्रदर्शन गरेर नेपालीको मन जिते।
अब हुने खेलमा पनि सन्दीपले अवसर पाए राम्रो खेल्नेमा उनका बाबुआमा ढुक्क छन्।
‘ऊ पहिलादेखि नै आफ्नो पढाइ र काममा मिहनेती थियो, यहाँ आएर पनि दिदीको घरमा बसेर एकडेमी आएर मिहनेत गर्‍यो,’ चन्द्रनारायणले भने, ‘मिहनेत पनि गर्छ, उसलाई भाग्यले पनि साथ दिन्छ। मलाई पूरा विश्वास छ, पछि पनि राम्रो गर्छ।’
सन्दीपकी आमा कोपिलादेवीलाई छोरालेजस्तै उसका साथीहरूले पनि आइपिएल खेल्न पाएहुन्थ्यो भन्ने लागेको छ।
‘नेपालको क्रिकेट अझ राम्रो होस्,’ कोपिलादेवीले भनिन्,‘सन्दीपले जस्तै उसका साथीहरूले पनि आइपिएल खेल्न पाऊन्।’
सधै हट अबतारमा आउने तृसना बुढाथोकी ,किन रोइन डाको छोडेर
अशोक दर्जीलाई रकस्टार सरस्वती लामाको यस्तो साथ